14 / 04 / 2019 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Abriil 14, 2019
Marmaray Derbi Dejinta
Saldhigga Smğütlüçeşme ee Marmaray ayaa loo xiri doonaa rakaab inta lagu gudajiro kulanka Fenerbahçe-Galatasaray. Iyada oo loo eegayo qabanqaabada ay sameysay Maamulka Magaalada Istanbul, 14.04.2019 ayaa la ciyaari doonaa Axadda .. Dhammaan tareennada Marmaray waxaa lagu ciyaari doonaa xarunta Söğütlüçeşme inta u dhaxaysa 14: 00-23: 00 saacadood. [More ...]
Burkay: 'Bursa 6 Milyan Dollar Ganacsiga Ganacsiga Dibadda'
Ibrahim Burkay, Gudoomiyaha Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BTSO), oo la kulmay xubnaha Golaha Maamulka Banka Bulshada ee BTSO, ayaa sheegay in 15 ay dhoofiso wax kabadan dalalka 121 oo leh bilyan ka badan Doolarka Mareykanka. [More ...]
Madaxweyne Büyükkılıç, oo lagu casuumay Kayseri Erciyes
Xilliga jiilaalka marka la eego barafka ayaa aad uga sii badan tan sannadihii la soo dhaafay sababtoo ah xilliga xagaaga ee Erciyes. Duqa Magaalada ee Metropolitan Memduh Büyükkılıç ayaa dadka reer Kayseri ku marti qaaday inay ka faa'iideystaan ​​quruxda Erikiyes. [More ...]
Gölcük Siretiye Mamuriye Bridge Wadajir Tiida 7
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso wadooyinka bixinta gaadiid tuulooyinka. Qeybaha ciriiriga ah ee jidadka la ballaariyey ayaa buundooyinka bixiya jid-marista waxaa dib looga saaraa laba haad. Macnaha guud, xaafada 7 ee Gölcük [More ...]
Dhexdhexaadinta miiska shilinka
Mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee dalxiiska, oo ku yaal 8 km una jirta bartamaha degmada Ayvalık ee Gobolka Balıkesir, waa gaariga fiilada u leh miiska shaydaanka halkaasoo lagu arki karo dhammaan Jasiiradaha Ayvalık iyo Jasiiradda Lesbos. Balıkesir weyn [More ...]
Tababarka Iskuduwaha Bulshada iyo Tareenka Aqoonsiga ee Malatya
Tababbarka iskaashiga bulshada iyo kobcinta tareenka ayaa ka dhoofay Istanbul Sirkeci Station bishii Abriil iyada oo ujeedadu tahay kor u qaadista wacyiga ku saabsan nooca iskaashiga bulshada, taageerista, horumarinta iyo ballaarinta iskaashatooyinka bulshada. [More ...]
Buyukakin oo udhiganta Mashruucyada Imtixaanka Goobta
Duqa Kocaeli Assoc. Tahir Büyükakın, Izmit Kabaoglu Village TÜRGEV ​​Foundation Mashruuca Dhismooyinka Joogtada ah ee dhismaha dadka lugeynaya, dhismaha inta badan dhismayaasha Kartepe Köseköy iyo SEKA [More ...]
Erciyes Summit ee Metropolitan
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu sii wadaa kulamada uu laleeyahay cutubyada ka tirsan Dowlada Hoose ee Magaalooyinka. Gudoomiyaha Büyükkılıç, Xarunta Dalxiiska Jiilaalka ee Erciyes ayaa sidoo kale qabtay kulan faahfaahsan oo ku saabsan. Waxaa lagu meelaynayaa Dawlada Hoose [More ...]
Marmaray waa la weeraray, rakaabkii ay soo gaareen iyagoo gudbinaya irridda Tube
Rakaabkii saarnaa tareenka sababay burburka Marmaray ayaa isku dayay inay gaaraan bixitaanka iyagoo raacaya marinka tuubbada. Sababo la xiriira burburka ka dhacay duhurkii saldhigyada Marmaray, waxaa jiray cufnaan. Rakaabkii saarnaa tareenka sababa la xiriira cilad awgeed [More ...]
Maanta taariikhda: 14 April 1894 Belova-Vakarel
Maanta taariikhda 14 April 1894 Belova-Vakarel waxaa loo kiraystay dadka reer Bulgarians. Waxaa la isku raacay in Bulgariisku ay bixiyaan 2.250 francs sanadkiiba si ay u noqdaan Faransiis 104.146 halkii kilomitirba.